कमल थापा र पशुपति शम्शेरको लफडाः पूर्व राजालाई धक्का - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
कमल थापा र पशुपति शम्शेरको लफडाः पूर्व राजालाई धक्का
जुट फुट र आपसी आरोप प्रत्यारोप अनि वेमौसमी शक्ति संर्घषको अन्त्यहिन राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको दल राप्रपा संविधान संसोधन तथा देशका जटिल मुद्धाको छिनोफानो गर्न निर्णायक बन्नुपर्ने बेला आफै मासिने खेलमा लागेको छ । फुटेर प्रजातान्त्रिक राप्रपा बनेका पशुपति शम्शेर राणा ४० प्रतिशत बहुमत सिद्ध गरेर निर्वाचन आयोगबाट दलीय मान्यता पाउन चुकेपछि सर्वोच्च अदालतको शरण परेका छन । न्याय किनिने देशमा दलको वैधानिकताको विवादको यो सर्वोच्चसंको हारगुहार पनि राणाको नयाँ राजनीतिक जात्रा नै हो ।
उता कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संस्थापन पक्षले पार्टी विभाजनको प्रस्ताव फिर्ता लिन पशुपतिशम्सेर राणा समूहलाई आह्वान गरेको छ । भदौ ४ गतेअघि एकताको पक्षमा उभिए गरिएको यस अघि कारबाही फिर्ता गरी पहिलेकै ठाउँ र सम्मान दिने पनि पार्टीले बताएको छ । पोईल गएकी श्रीमतिलाई पुनः घर भित्रयाउने शैलीको थापा पक्षको निर्णयले उ पनि पार्टीको बहुमत हिस्सा जोगाउन धर्मराईरहेको सन्देश यही पानीमरुवा आव्हानले दिएको छ ।
बिहबारदेखि हेटौंडामा २ दिन सम्म चलेकोे पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विभाजनले लाखौं कार्यकर्तालाई चिन्तित बनाएको र यसले पार्टी व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन आब्हान गरेको भए पनि त्यसलाई राणा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेर खारेज गरिसकेको छ ।
थापा पक्षले पार्टी विभाजन प्रयासका बावजुद राप्रपा आफ्नो बिचार, सिद्धान्त र आदर्शप्रति सदैव अटल र दृढ रहने बताएर आफूमाथि लागेको सैद्धान्तिक स्खलनको आरोपको पुनः खण्डन गरेको छ । तर यो वचाऊको अब खास तुक देखिदैन । पार्टी विभाजन हुनुमा पार्टी्भित्रकै स्वार्थी, सत्तालोभी र आत्मसमर्पणवादी मानसिकता भएका अवसरवादीहरु हतियारका रुपमा प्रयोग भएको कमल थापा समुहको आरोप मनशान्तिको चित्तबुझाउने मेलो शिवाय केही होईन । किन भने पार्टी बिभाजनको श्रृखला सकिएको छ, केवल राणा पक्षको वैधानिकतामा मात्रै हलो अडकेको हो ।
बैठकले कुनै पनि हालतमा राप्रपा फुटाई छाड्ने योजनामा सत्तारुढ दलहरु एवं सम्पूर्ण राज्यशक्ति नै प्रयोग भएको आरोप लगाएर चाहि आफू नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्ने आख्यानलाई चरितार्थ गरेको छ । किन भने बिभाजनको मुल चुरो आन्तरिक हो, बाह्य कारण त जहिल्यै सहायक मात्र हो ।
राणालाई अदालतले जोगाउला ?
राप्रपाबाट अलग भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका तर मान्यता नपाईसकेका पशुपतिशम्शेर राणाले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । ह्ेटौडा वैठकबाट थापा समुहले कारवाही माफीको निर्णय गरेलगत्तै शुक्रबार दिउँसो केही केन्द्रीय सदस्यसहित अदालत पुगेर राणाले मुद्दा दायर गरेका थिए । यसले थापाको आव्हानको औचित्य खारेज मात्रै गरेन, राणा जसरी पनि दल दत्र्ता गर्न साम, दाम , दण्ड , भेद जुनसुकै हत्कण्डा प्रयोग गर्न तयार रहेको सन्देश दियो । र, उनी अब आयोगविरुद्ध नै जाईलागेका छन, मान्यता पाउने खेलका लागि ।
रिटमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउन लागेको अवस्थामा राप्रपाका कमल थापाले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई अपहरण गरेको, धाकधम्की देखाएको समेत उल्लेख गरिएका कारण यो मुद्धा न्यायलयका लागि पनि नयाँ बहसको विषय भएको छ । यो हदका गैरराजनीतिक हर्कतका न्यायिक सुनुवाई राजनिितक नियुक्तीमा भरिएका सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरुका लागि पनि रोचक हुनेछ शायद ।
घर न घाटको हुदै गरेको राणा पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका ४० प्रतिशत बढी हस्ताक्षरहरुको वैधानिकतामा प्रश्न उठेर आयोगबाट सहजै दलीय मान्यता पाउन नसकेपछि राणा अदालत गएका हुन । जसरी आयोगले राणालाई सिधै साथ दिएन, त्यसको प्रतिकार उनले अदालतबाट गर्न खोजेका छन । अब आयोगले न्यायिक आदेशको आडमा टेकेर सुरुमा बुझाएका हस्ताक्षरलाई नै सदर गरेर राणा पक्षलाई दलीय मान्यता दिएमा अनौठो हुने छैन । किन भने, आयोगमा ४० प्रतिशत हस्ताक्षर रुजु गराउन नसकेर राणाले थप १० दिने म्याद मागेकै अवधिमा उनी अदालती शरणमा परेका छन ।
कमल थापा नै बिभाजनका कारकः
एकता र पुर्नमिलनका वा दलीय मान्यता प्राप्तीका यी फरक फरक रस्साकस्सीका वीच पनि सत्य के हो भने राप्रपा अहिले विभाजित भैसकेको छ । अध्यक्षकै नाताले पार्टी फुटको जिम्मेवारी कमल थापाकै हो । तर पनि नेपाली कांग्रेसदेखि माओवादी केन्द्रसम्म, शेरबहादुर देउवादेखि विमलेन्द्र नीधिसम्म, दरवारदेखि भारतसम्मलाई आरोप लगाएर थापा आफु आरोपमुक्त पानी माथिको ओभानो हुने प्रयासमा छन् । पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगलाई लगातार आरोप लगाउन उनी मरिहत्ते गर्दैछन् । कारण जे जस्तो प्रस्तुत गरिए पनि पार्टीका भित्री जानकार स्रोतहरु कमल थापाको राप्रपा एक्लै हाँक्ने घमण्डका कारण पार्टी फुट्न पुगेको बताउछन् ।
राप्रपालाई जीरोबाट हाँक्छु भनेर थापाले पार्टीपंक्तिमा पटक–पटक बताउदै आएका छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य राप्रपा नेपाल संचालन गरे जस्तै एकल निर्णयमा राप्रपा चलाउने उनको मनसाय नै हो, जसले राप्रपालाई हाडी सरह फुटाइदियो । कमल थापाको घमण्ड र चरम महत्वाकांक्षाले राप्रपा फुटेको घाम जत्तिकै छर्लङ छ । किन भने उनी आफूलाई पछिल्ला दिनमा सर्वशक्तिमान ठान्दथे । अवसरवादका पर्याय बनेका थिए ।
स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा नसोचेको करारी हार सामना गरेपछि थापाले यस्तै मनसाय सार्वजनिक गरेका थिए । निर्वाचनको समीक्षा गर्ने क्रममा उनले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरुलाई स्पष्ट रुपमा पार्टीलाई जीरोबाट अर्थात आफूले चाहे अनुरुप अघि लैजाने बताएका थिए । डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी समुह वा त्यसअघि केशरबहादुर विष्ट समुह वा हाल राणा समुह बाहिरिदा पनि थापाले ‘साथ दिनेले साथ दिन्छन्, अरुलाई छाडेर भए पनि म एक्लै अघि बढ्छु’ भनेर थापाले पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न वैठकमा बताएका थिए ।
पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता पशुपति समशेर राणाको असुन्तुष्टी सार्वजनिक भएपछि राप्रपा भित्र आन्तरिक समस्या समाधान गरेर पार्टीलाई एक ढिक्का अघि बढाउन नेतृत्वमाथि चौतर्फी दवाब परेको थियो । केन्द्रीय समितिको वैठकमा एकस्वरमा सबैले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । दोस्रो तहका नेताहरु धवल समशेर राणा र राजेन्द्र लिङदेनले पनि वरीष्ठ नेता राणालाई मिलाउनु पर्दछ भनेर अध्यक्ष थापालाई मनाउन भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । तर अध्यक्ष सँगको नीतिगत मतभिन्नताका कारण दोस्रो तहका नेताहरु निराश भए ।
पछिल्लो समय पशुपति समशेर राणा असन्तुष्ट हुँदा समेत सार्वजनिक रुपमा वा आन्तरिक रुपमा थापाले समस्या समाधान गर्न वास्ता नगरेको परिणाम भुईको टिप्न खोज्दा खल्तीको गुमाउने अभागी साबित भएका हुन कमल थापा । अहिले विभाजनको मारमा रहेका थापाले राणाको नेतृत्वमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) निर्माण गर्ने प्रक्रियाले वैधानिकता नपाएमा आत्मरती लिन सम्म सक्ने छन, तर गिरेको साख फित्र्ता गर्न र उस्तै शक्तिशाली राजावादी कित्ताको नायक बन्न अब लगभग असंभव छ ।
जो बने कमल थापाका संकटका सारथीः
गत फागुन पहिलो साता राजधानीमा एकता महाधिवेशन गर्दै गर्दा प्रतिष्पर्धी दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरु कमल थापाको दललाई वैकल्पिक राजनीतिक दल बन्नका लागि शुभकामना दिन होडबाजी गरिरहेका थिए । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केप ीओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सकेसम्मका भारी शव्दावलीहरुका साथ थापा नेतृत्वको राप्रपालाई वैकल्पिक शक्ति बन्न शुभेच्छा दिएका थिए । प्रचण्डले थापासंग मिलुँ मिलु लाग्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गरेसंगै हौसिएका थापाले प्रत्युत्तरमा राजावादीलाई गणतन्त्रवादीसंग र राजावादीलदाई गणतन्त्रवादीसंग नतर्सन सुझाएका थिए । गणतन्त्रमा राजतन्त्रपन्थको फ्यूजनका लागि उनले सम्वद्र्धनवादको नयाँ राजनीतिक लाईनको व्याख्याताका रुपमा आफूलाई उभ्याउदै थिए ।
तर साउन २२ मा राप्रपा फुट्यो, एकताको औचित्यमा प्रश्न उठाउदै । पार्टीको ठूलो हिस्सा नयाँ पार्टी बनाएर आफै आधिकारिक राप्रपा भएको दाबी सहित निर्वाचन आयोगमा धाईरहेका बेला केही निश्चित पात्रहरु छन जसले कमल थापालाई साच्चै काँध थापेका छन ।
राप्रपाको बिभाजनका बाबजुत वरिष्ठ नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र उनका छोरा जयन्त चन्द अहिले पनि कमल थापा नेतृत्वकै राप्रपामा छन । चन्द राप्रपका एक जीवित संस्थापक मात्रै होईन्न, भद्र छवीका उच्च नेता पनि हुन ।पुरानो राप्रपाका राजावादी रोशन कार्की, भुवन पाठक जस्ता नेताहरुलाई पनि आफैतिर गोलबन्ध गर्न सकेका अध्यक्ष थापाले पुराना नेता बालाराम घर्तीमगरदेखि अन्यलाई पनि समेटन सकेका छन ।
यसैगरी जिल्ला पार्टी नेतृत्व पनि अधिकाँश संस्थापनकै पक्षमा रहेको राप्रपाको दावी छ । २०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै राप्रपा र वुद्धिमान तामांग उत्तिकै पर्याय मानिने पात्र हुन । संगठनमा विशेष दखल भएका तामांगले पनि थापाको साथ छोडेन्न । झापाका दुई स्थानीय तहमा पार्टीलाई दुर्लभ विजय दिलाएका र पूर्व क्षेत्रमा पार्टीको पकड क्षेत्र बढाईरहेका युवा नेता राजेन्द्र लिंग्देन पनि कमल थापाका संकटका सारथीका रुपमा देखा परेका छन । नेपालगन्जका निर्वाचित मेयर धबल राणा पनि उनैतिर छन, कम्तिमा अहिलेसम्म ।
शाही मन्त्री टंक ढकाल हुन वा रेडियो नेपालको जागिर छोडेर राजनीतिमा होमिएकी महिला कोमल वली नै किन नहुन कमल थापाका संकटका सारथीका रुपमा देखा परेका छन । पार्टी बिभाजन जस्तो कठिन मोडमा कमल थापालाई साथ दिने बलियो आन्तरिक पार्टी तप्कामा देखा परेको छ प्रवास संगठन । अधिकाँश देशका प्रवास संगठनहरुले थापाको पक्षमा खुलेर समर्थन जनाउदै विज्ञप्तीहरु दिएका छन । दोलखाका युवा नेता तथा प्रवास विभागका ईन्चार्ज विजय खड्काले अधिकाँश देशका प्रवास संगठनहरुलाई कमल थापाको पक्षमा उभ्याउन सकेका छन । युवा नेता खड्काले सामाजिक संजालमा नेतृत्वको कडा प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन ।
संकटका बेलामा नै असली आफन्त चिन्ने मौका पाएका अध्यक्ष थापाले गुमाएका पात्रको तुलनामा उनलाई साथ दिने पात्र पनि कमजोर राजनीतिक छबीका भने छैन्न । हो, सोचे जस्तो हुन्न राजनीतिको रेखा । असंभव पनि केही हुन्न राजनीतिमा । क्षणभरमै शिखरमा पुग्नु र निमेषभरमै रसातलमा मिल्नुपर्ने परिस्थितिहरुको संयोग पनि हो राजनीति । अहिले नेपालको दक्षिणपन्थी राजनीतिका एक अग्ला नेता कमल थापा त्यही क्रुर परिस्थितिका शिकार भएका छन । पार्टी बिभजनको अप्रत्याशित झडकाले दिएको राजनीतिक दुखको पहाड, पहिरो र क्षतीको पीडावोध शायद कमल थापा जति अरु शायदैलाई होला ।
यी सबै घटनाक्रमहरुको निचोड चाहि के हो भने के गर्छस मंगले आफ्नै ढंगले भने जस्तै पंचायत र राजतन्त्रका जीवन्त राजनीतिक अवशेषहरु अब आफै सिद्धिने आत्माघाती खेलमा रुमल्लिएका छन । देशको प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा यो उतिसारो घाटा होईन, तर पूर्वराजावादी कित्ताको राजनीतिमा भने विशाल धक्का हो, राजावादी राजनीति नासिदै जान थालेको पूर्वसंकेत पनि हो ।